ယောက်ျားကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း Ventral Tegmental Dရိယာ Dopamine ဆဲလ်ကိုအသက်သွင်းခြင်း Sex Abstinence (2016) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင် Neuroplasticity နှင့် D-Amphetamine Cross-Sensitization ကိုထိန်းညှိသည်။
J ကို neuroscience ။ 2016 Sep 21;36(38):9949-61. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0937-16.2016.
Beloate ln1, Omrani တစ်ဦးက2, သွားလေ၏ RA2, ဝက်ဘ်က IC3, Coolen LM4.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုစိတ်ကြွဆေးဆုလာဘ်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ် abstinence တဲ့ကာလအပေါ်မှီခိုအနေနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျနော်တို့အရင်ကအလားအလာ dopamine အဲဒီ receptor activation ကနေတဆင့်, အနျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosB (NAc) ဒီလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive တစ် key ကိုဖျန်ဖြေကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသို့မဟုတ်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive များအတွက် mesolimbic dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါကသီးသန့် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) dopamine ဆဲလ်တွေအတွက်ဒီဇိုင်နာမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် activated inhibitory ဒီဇိုင်နာ receptors ကို အသုံးပြု. စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ rAAV5 / hSvn-DIO-hm4D-mCherry TH ၏ VTA သို့ထိုးသွင်းခံခဲ့ရ :: Cre အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များ။ ယောက်ျားမိတ်လိုက်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်၏5ရက်ဆက်တိုက်တစ်ခုချင်းစီမတိုင်မီ clozapine N-အောက်ဆိုဒ် (CNO) သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်ထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။7ဃတစ်ခု abstinence ကာလအပြီးတွင်အထီးစိတ်ကြွဆေး conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) အတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်ယောက်ျားအဖော်ရှာသို့မဟုတ်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် cFos ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ΔFosBနှင့် VTA dopamine Soma အရွယ်အစားလျှော့ချရေးတို့အတွက်ကိုင်တွယ်မတိုင်မီ CNO သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များ CNO မိတ်လိုက်အပြုအမူမထိခိုက်ခဲ့ပါကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အဲဒီအစား, CNO အဆိုပါ NAc အတွက်စိတ်ကြွဆေးချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ-သွေးဆောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive, ΔFosBတားဆီးနှင့် prefrontal cortex medial နှင့် VTA dopamine Soma အရွယ်အစားလျော့နည်းစေပါသည်။ hm4D-mCherry ၏ expression VTA dopamine ဆဲလ်မှသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကြီးနှင့် CNO VTA dopamine ဆဲလ်တွေအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် cFos စကားရပ်ပိတ်ဆို့။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် VTA dopamine activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်သို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်မှုများအတွက်မလိုအပ်ပါကြောင်းတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားများကိုပေး။ အဲဒီအစား, VTA dopamine တိုက်ရိုက်သဘာဝဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံကိုစဉ်အတွင်း mesolimbic လမ်းကြောင်းအတွက် neuroplasticity ဖြစ်စေတဲ့အားဖြင့်သဘာဝကဆုလာဘ်များဆုံးရှုံးမှုအောက်ပါမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်တိုးမြှင့်အားနည်းချက်စေတယ်။
သဘာဝကဆုလာဘ်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖျန်ဖြေသောအာရုံကြောလမ်းကြောင်းအပေါ်အလွဲသုံးမှုလုပ်ရပ်၏မူးယစ်ဆေးဝါး။ သဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူတွေမှထိတွေ့မှုနောက်ဆက်တွဲမူးယစ်-related ဆုလာဘ်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေ abstinence တဲ့ကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံ, သူ, ယောက်ျားကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးအဘို့တိုးချဲ့ဆုလာဘ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီလေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကနေစဉ်အတွင်း ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံ၏ activation စိတ်ကြွဆေးဆုလာဘ်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ventral tegmental ဧရိယာ dopamine ဆဲလ် activation နျူကလီးယပ် accumbens အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်အာရုံကြော adapter, prefrontal cortex နှင့် ventral tegmental ဧရိယာများအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မှာသဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များအကြားအပြန်အလှန်အတွက် mesolimbic dopamine တစ်အခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြ, နှင့်သဘာဆုလာဘ်ဆုံးရှုံးပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်အားနည်းချက်အတွက်အပြောင်းအလဲများတဲ့ key ကိုဖျန်ဖြေအဖြစ် mesolimbic dopamine ခွဲခြားသတ်မှတ်။
သော့ချက်စာလုံးများ - FosB; mesolimbic; နျူကလိယ accumbens; prefrontal cortex; စိတ်ပညာ ဆုလာဘ်